Ogaden News Agency (ONA) – Odayaashii lagu soo xareeyay Jigjiga oo ka xogwaramay ujeedada loo soo ururiyay
Odayaashii lagu soo xareeyay Jigjiga oo ka xogwaramay ujeedada loo soo ururiyay
Posted by ONA Admin	/ November 16, 2012
Riwaayadda ka socota Jigjiga ee sida la wada arkayo uu soo alifay Abraha Wolde dhamaystirkeedu waa fashal. Sababtoo ah kuwa jilaya iyo kuwa daawanaya iyo midka alifay intuba way ogsoon yihiin ujeedada laga leeyahay in aanay u hirgalaynin. Wararka naga soo gaadhaya gudaha gaar ahaan Jigjiga waxay isku raaceen in shirk siduu u socdo ay ka muuqato inuu ahaa mid si boobsiis ah loo abuubulay oo qorshaha loo dajiyay ay kala wataan Abraha Wolde iyo Cabdi iley. Waxay ku soo koobeen qaar ka mid ah odayaasha shirka fadhiyay ujeedada dadka la’isugu keenay sidan;
Wuxuu u muuqday dardaran uu Cabdi ilay rabo in lagu saamaxo iyo in aan danbe loo raacin marka uu xilka katago.
Inay shirka ka sharciyeeyaan dadkii ay laayeen ciidamada Itobiya iyo maxaysatada Cabdi iley sababteeda la dulsaaro ONLF.
Shirka iyo habkuu u hadlayay Cabdi iley waxay u muuqatay arin bilaaw ah oo uu rabo in uu dadka kusoo dhexgalo
Waxaa kaloo la doonayay in dadka laga dhaadhiciyo inay ONLF ka danbeeyso burburkii wada hadaladii Kenya
Waxaa kaloo la doonayay in dadka laga ansixiyo in aan ONLF dib loola hadlin ilaa ooy dastuurka qaataan si rajooyinka nabadu u sii fogaadaan.
Waxaa ka muqatay ismeeydhid iyo raaligalin iyo in uu Cabdi iley fidiyo brobaganda ii dheh ah in uuna nin ka fiicani dalka soo marin iyo
In uu sharciyeeyo dagaalka uu ku qaaday shacabka oo dhan een waxba loo kala aabo yeelin taasoo la doonayo in onlf dusha loo saaro. Iyagoo dhahaya majirin wado kale oo noo bananeeyd sidaas darteed ayaan sharciga ugu dhaqmi weeynay oo wadankii ayaa goob dagaal noqday.
Dhaqanka Itobiya oo ah mid ku dhisan cabsi joogta ah iyo is-adoonsi oo qofka laga doonayo inuu u fikiro siduu naftiisa oo kali ah u badbaadin lahaa ayaa odayaasha iyo dadka naafada ah ee meesha la’isugu keenay mid walba uu ogsoonaa in haduu khadka loo jeexay ka baydho oo wixii loogu talagalay shirka waxaan ahayn uu ku hadlo uusan dib ugu noqon doonin reerkii laga soo qaaday. Inkastoo odayaasha ay cabsidaa qabeen hadana, Cabi iley wuxuu si gooni ah kolba ugu yeedhayay odayaasha qaar ka mid ah oo uu handadayay lahaan is-ilaaliya. Sidoo kale waxaa dhex socday odayaasha maxaysatada Hawaarinta oo ka ilaalinayay odayaasha inay eedeeyaan oy ka xogwarmaan dhibka ay ku hayaan dadka shacabka ah maxaysatada Hawaarinta (liyuu booliska).
Warar kaloo aan goor dhaweyd helnay ayaa naloogu sheegay inay liyuu booliska qaar ka mid ah odayaasha kala bexeen meelihii ay seexanayeen oon la ogayn meel ay ku suganyihiin. Iyadoo maanta uu ku geeriyooday oday magaciisa naloogu sheegay Cabdi Budul oo ka mid ahaa odayaashii laga soo qaaday Awaare. Geerida odaygan ayaa aad loo hadal hayaa, taasoo aan gadaal ka ogaan doono sababaha uu u dhintay iyo inuu ka mid ahaa odayaashii ay horey ula bexeen Hawaarinta.